Sachigaro weAfrican Tourism Board muSenegal paBasa Rakakosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Sachigaro weAfrican Tourism Board muSenegal paBasa Rakakosha
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Senegal Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sachigaro weATB muSenegal
Sachigaro weAfrican Tourism Board (ATB), VaCuthbert Ncube, vari kuenderera mberi nebasa ravo rekufamba kumativi ose ezvekushanyirwa muAfrica vachiunza kondinendi pamwe chete.
Misangano yemubatanidzwa wenyika mbiri idzi yakaitwa nechikwata cheAfrican Tourism Board pakugadzirisa patsva Senegal mugwara rekondinendi.
Pachirongwa paive nehurongwa hwekudyidzana uye chishuwo chekusimbisa hukama pakati pemasangano maviri ekusimudzira kushanya.
Misangano iyi yanga ichitungamirwa na Honourable Ambassador VaDeme uye Executive chair, Cuthbert Ncube.
Nezuro the African Tourism Bhodhi Mutungamiriri vakasangana neMutungamiriri weCompact Yaatal, sangano rinomiririra vane chekuita nekushanya muSenegal vane nhengo dze934 value cheni pahofisi yavo muguta reSoly rinoshanda senzvimbo inotungamira yekushanya munyika.
Mutungamiri wesangano iri, VaBoly Geuye, vakaita misangano yemubatanidzwa nechikwata cheATB icho chaitungamirwa na Honourable Ambassador VaDeme pamwe na Executive Chair, Cuthbert Ncube, pamusoro pezvirongwa zvekudyidzana pamwe nekusimbisa hukama pakati pemasangano maviri aya mukusimudzira tourism uye kugadzirisa zvakare Senegal mukati meiyo kondinendi tsoka.
Senegal yakaita zvakawanda mukudzora kupararira kwedenda nenyika ichiwana hutachiwana hunosvika 0% iyo yakwezva huwandu hwakakura hwevashanyi vazhinji kubva kuParis, Spain, Germany, UK, uye zvikamu zveAsia. VaBoly vakasimbisa kukosha kwekubatana kwepedyo neATB kuitira kuti pave nekugadzirisa kwakarongeka kwekondinendi, se Senegal yakamira zvine hungwaru kutamba pamberi mune zvehunyanzvi, tsika, uye kushanya kwemitambo pamusoro nepamusoro pezviratidziro zviri pamhenderekedzo yegungwa zvinosiya mufambi ari murudo nenzvimbo ino yakanaka inove inotsvakwa zvakanyanya nevafambi veMarudzi.
Husiku hukuru hwekushanyirwa huchaitwa nenzira yemusangano muna Zvita 10, 2021, uyo uchaunza makurukota ezvekushanya nevatori vechikamu kubva kudunhu reWestern Africa, iro richaitirwa makurukota ezvekushanya uye nekutsigirwa neATB. Kubatana kwakakura uye kwakakura pakati pevanobata zvekushanya kuchaisa Africa kuti iremekedzwe munharaunda yepasirese, uye kushanya kunofambisa kubudirira kune ichi chikonzero.